Telegram emelitere na nsụgharị nke 2.96 na mmelite na ọsọ nke ngwa | Esi m mac
Anyị na-aga n'ihu na mmelite nke ngwa ozi Telegram na oge a ọ gafebeghị ụbọchị 3 kemgbe ụdị nke gara aga na anyị nwere nke ọzọ dị. Na mbu ihe anyi puru ikwu bu ee ihe ngwa ngwa ma ọ bụ ọmụmụ na ngwa na-ekele dị ka akụkụ dị mma nke mmelite a, mana dịka ihe na-adịghị mma m ga-ekwu nke ahụ na-emechi na mberede mgbe ị na-ehichapụ ma ọ bụ na-achọ ihichapụ ozi. N'ọnọdụ ọ bụla, ihe dị mkpa bụ na ha nọgidere na-agbakwunye mmelite na Telegram na nke a pụtara ìhè na-ahụ ụda nke mmelite ọhụrụ.
Olileanya ngwa ahụ ga-aga n'ihu na-egbu maramara na izu ndị na-abịanụ, ọ bụ ezie na ahụhụ ndị ahụ pere mpe. Mmeghari emejuputara na nke a version 2.96 wepụtara ha bụ ndị a:
Ngwa ahụ na-ezochi nsonaazụ ọchụchọ na-achọghị ugbu a
Speed ​​mgbe emeghe chats na-mma na size nke window gbanwetụrụ
A gbakwunyere mpaghara Portuguese
Ha na-agbazi njehie nke ụdị gara aga
N'ihi na ọtụtụ n'ime anyị, a na ngwa aghọwo otu n'ime ihe ndị dị mkpa na Mac tinyere Apple onwe Ozi ngwa. Ọ bụ eziokwu na n'okwu a, ngwa Telegram anaghị arụ ọrụ ọ bụla ma ọ bụ 100% dị ka tupu ederede zuru ezu na Swift 3.0, mana nke a bụ ihe ndị mmepe ngwa ga-enweta site na mmelite ndị a. Ugbu a, ihe anyị hapụrụ bụ ịkọ akụkọ njehie ndị anyị hụrụ na obere nke nta nke ngwa ga-alaghachi na nwelite mmelite nkịtị, ya bụ, ọ bụghị kwa ụbọchị atọ ma ọ bụ anọ ka ọ na-eme ugbu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mmemme Mac » Mac App Store » Telegram emelitere na mbipute 2.96 na ndozi na ọsọ nke ngwa ahụ
Beta 4 nke tvOS 10.2.1 na watchOS 3.2.2 maka ndị mmepe